Adeeg geeyo music Apple
Marka aan ka hadlo arrimuhu ugu kulul ee qalabka inankeeda, waa music Apple ah. Bilaabay shirka sanadlaha ah ee dunida oo dhan, Apple ayaa la ballaariyey jahooyinka iyo milmay adeegyada geeyo cusub ee macruufka 8.4 iyo Lugood 12.2. Waxaa jira dad badan FAQ ee ku saabsan Apple geeyo music adeega sida bedeli Lugood? Waxay naga caawin doonaan dhagaysan offline music ah? Waxa dhab ahaan waa music tufaaxa? Maxaa ku dhici doona lambarka garaaca jira?
Qeybta 1: Apple geeyo music FAQ
Qeybta 2: Comments warbaahinta ku saabsan adeegyada geeyo music cusub bilaabay
Qeybta 3: Comments ka ku saabsan dadka isticmaala adeegga geeyo music cusub bilaabay
Qeybta 4: Download geeyo music free la TunesGo
1) Waxa dhab ahaan waa adeeg geeyo music Apple?
Kani waa adeeg music pre-rakibay oo dhan macruufka cusub iyo qalabka X OS iyo dadka isticmaala ay hadda awood u yeelan doonaan in ay si fudud u sii qulquli ay music jecel, halkii aad ka iibsigu. Haddii aad tahay user Apple ah, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waa la bixin lacagta guri oo aad u hesho in ka badan 25 milyan oo heesaha lagu kaydiyaa maktabadda music Apple helitaanka fudud. Tani waxay sidoo kale u dhaqmaan sida aad ururinta music shakhsi oo aad jeclaan lahayd in ay dhagaystaan ​​mar kale iyo mar kale lagu kaydiyo.
2) Sida ay u ka duwan yahay Lugood?
Lugood waa majorly ku saabsan lahaanshaha warbaahinta u kaydiya xogta magac iyo warbaahinta kale waxay ka mid yihiin taxane TV, filimada iwm Sidoo kale, uma baahnid in aad bixiso nooc kasta oo lacag rukun si aad u hesho Lugood sababtoo ah dhammaan songs, filimada ama ay muujinayso TV-ga ayaa lagu soo iibsaday si gaar ah waqtiyo kala duwan ka soo dukaanka Lugood ama ka qaar ka mid ah ilaha kale. Halka marka aan ka hadlo music Apple, waxa kaliya oo ku saabsan geeyo. Waxaad ku bixin mid ka mid ah lacagta xilligii nasashada, oo aad u furid dunida ka mid ah buugga music tufaax oo aadan dhab ahaan iska leh. Files ayaa waxaa lagu ma dhab ahaantii ku kaydsan qalab aad laakiin aad tahay oo kaliya karayn inuu dhagaysto ah kuwan raadkaygay ku jira waxaa maktabadda music Apple.
3) Sidaas Lugood waa dhintay hadda?
No, ma si sax ah! Haddii aad weli diyaar u yihiin in ay helaan Lugood on qalab aad, kaliya aad u isticmaali karaan Music ah tab iyo waxaad ka heli doontaa warbaahinta aad ku kaydsan maktabadaha Lugood ee hoos.
4) Meeqa kharashka adeegga geeyo this?
Haddii aad qabto wax qaybsiga qoyska iCloud ah, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso $ 14.99per bil oo ay ku jiraan 6 xubnaha qoyska ama $ 9.99 shaqsi ahaan. Waxaa jira ikhtiyaarka ah oo saddex bilood adeegga maxkamad in aad ka abaalmarinayn hor bixiyaan lacagta xaddiga guri.
5) oo qalabka aan yeelan karaan inay helaan adeeg geeyo music tufaaxa?
Dhammaan qalabka inankeeda la macruufka 8.4 iyo wixii ka sareeya sida iPhone, iPad, iPod iyo taageeraan adeeggan. Sidoo kale, Apple ayaa lagu wadaa in ay bilaabayaan adeeggan ee Apple TV iyo telefoonada Android qaboobaha dayrtan.
6) si fiican u shaqayn doona Airplay?
Dabcan haa tahay! Song kasta oo aad ka dooran doonaa in ay dhagaystaan ​​yeelan doonaan button Airplay ah kaliya socota, waxa uu. Waxaad u baahan tahay inay hesho badhanka Airplay iyo doortaan qalabka la jecel yahay in ay ku jirase aad si.
Apple Music leedahay wax badan oo ka iman kara, laakiin cayayaanka ay iCloud Music Library iyo interface ah kuwo lagu wareero oo u dhawrtaan ka khayr badan Spotify,
Apple Music kuu ogolaanayaa inaad u dhagaystaan ​​30 milyan oo heeso ka soo saarney Lugood ah, oo lagu daray music kasta oo aad soo iibsatay ka Lugood sanadihii la soo dhaafay. Nidaamka talo app wuxuu isticmaalayaa algorithms iyo aadanuhu u yihiin in la soo qaado ay Gurtida kaamil ah oo aad u. Siri kaa caawinaysaa in aad ka heli music cusub guridda qaar ka mid ah amarrada cod cusub.
Design app waa qaabkii macluumaad aad u badan oo waa wax caleenta adag ama ay u maraan. iCloud Music Library waa dhib badan oo aan joogto ahayn, iyo waxa aan si sax ah u shaqeeyo qof kasta.
Tayada Sound waa quruxsan niyad jab. Dooni maayo shaqada barta halkan laakiin jeer halkaas oo aan ka riixayo music xal sare, 256kpbs MP3 ma wanaagsana ku filan. Waa dareemi liita dhufto ee kale ee la mid ah marka la labo ka mid hufan ee headphones dhagaysto. Sorry Apple, ma ahan wanaagsan oo ku filan - gaar ahaan sida aad, ee dhammaan noocyada samayn karaan wax badan oo fiican.
Waxaan jeclahay adeegga cusub music Apple geeyo oo ka helaysaan ka khayr badan Spotify maalin kasta. Waxaan jeclahay xaqiiqda ah in ay ku siiyey tijaabo ah oo lacag la'aan ah kaas oo qaata muddo hufan ee 90 maalmood. Adeegyada badankood waxay bixiyaan maxkamadda 30 maalmood oo lacag la'aan ah, laakiin gebi ahaanba Waan ku raacsanahay muddada saddexda bilood ah.
Apple Music app ayaa wax si fudud qof aniga oo kale ah waa kuwa taageere music ah. Waxaan maqli karo in Idaacadaha sida Beats1, heli playlists curated, wadaagaan playlists iyo sidoo kale heli music on qalabka kala duwan. Anigu waxaan ahay taageere Apple weyn laakiin adeeggan ayaa igu galay taageere ka sii weyn.
Apple ayaa dhab ahaantii dhigay daahfurka music wadnaha aad adeeggan oo Waxaan qabaa inay si dhab ah u shaqeeyo. Dadka halkaas kuwa jeclaan music laakiin ma aqaano waxa ay u dhagaystaan ​​iyo sida loo helo in la ogaado oo ku saabsan fanaaniinta cusub iyo heesaha, Apple Music noqon kartaa riyo ii rumowday. Waxaan inta badan ma jecla in loo sheego waxa la dhagaysan, laakiin Diyaar ayaan u ahay in imtixaanka ay ku oolnimada - ma Apple ogahay music dhadhamin ka fiican tahay in aan sameeyo? Waxaan dhawaan arki doonaa!
Waxa aan jeclahay oo ku saabsan adeeggan waa in ay dhab ahaantii wuxuu iga caawisaa in ay gaaraan in music cusub iyo in aad ka oo dhan ku baahsan adduunka. Ayaan ka heli karaa playlists gaar ah gaar ahaan curated aniga iyo sida ay ila dhadhan. Xaqiiqada ah in khubaro aadanaha oo dhab ah ayaa soo jeedinaya liiska, kuwaas oo ka dhigaysa iga dhab ahaan doonayaan in ay dhagaystaan ​​heesaha kuwa. Waxaan si lama filaan ah waxaan ahay taageere music ah xog dheeraad ah dhex koox ka mid ah asxaabta. Jidka si ay u tagaan Apple!
Music Apple wada baabbe'een oo ku saabsan 28% aan batteriga maanta, laakiin dhibaatada ugu weyn waa in aan awood badan oo kale oo wax baabbi'iya Chine ayaa maanta loo isticmaalo, iyo in mid ka mid ah ma ahaa ... 28% ahaa markii aan xitaa ma isticmaalaya Apple Music oo xitaa ma ahaa ee asalka ah! Tani waxay i keenay oo dhan ka socda updates iyo helid soo jeeda xidho si uun inaan ka qaadaan karin phone dhowr saacadood. Halis ah Apple !? Waxaan ka tagay Fadlan Hel aad ficil (dhabarka) wada !!!
Waxaan gebi ahaan neceb ku Lugood Music app cusub. Inta badan music aan bixi ama huleeshay waa mid qarsoon ama waa la waayayaa on my hawada iPad. Waxaan doonayaa in aan jir Lugood hadda. Nasiib wanaag waxaa Lugood musuqmaasuq on my iPhone ama computer ma ay yeelin. Hadda waxaan ahay baqeen in xitaa download nooc kasta oo updates ka Apple. Sida iska cad waxaan marnaba bixin doonto adeeg geeyo this qaabka hadda. Waxaan jeclaan lahaa ogaa in aan sida ay u baajiso maxkamad taasi oo lacag la'aan ah si degdeg ah.
Waan necbahay adeegga cusub! Ma doonayo in ay saxiixdo qorshaha iyo waxaan aad u jecel yihiin u lahayn in ay sii qulquli adeeggan ku A.villa 6 qalabka inkastoo aan leeyihiin aaladaha ku filan si ay u samayn! Waxaan rabaa inaan noqdo inaan tago oo soo iibsadaan heesaha Waxaan doonayaa inaan sida aan u awoodaan inay sameeyaan isticmaalo awood!
Aad baan u careysan walax adeegyada Times oo dhan. Sababtan awgeed qaar ka mid ah uma sameyn karo offline xitaa kala bar heesaha ee la heli karo, sababtoo ah waxaa ii sheegayaa in adeega uu yahay mid aan firfircooneyn oo aan ciyaari karin music. Waxaan u arkaa wax aan waxtar lahayn.
Tayada Sound Runtii waa niyad jab! Tani waa wax aan la filayaa in ka soo baxay Apple. Apple ayaa had iyo jeer wax aced laakiin markan waxay u muuqataa in ay sameeyeen qalad weyn.
The Sheet Goobaha TOP 5 Piano
Free Mp3 Download Music Online aan Diiwaan-gelinta sharci ah
> Resource > Music > Service Apple Music Streaming